सरकारले चार जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा - Megatv
सरकारले चार जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा
१८ असार २०७८, शुक्रबार १३:१२
सरकारले चार जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकबाट डा. दामोदर रेग्मी, गणेशप्रसाद पाण्डे, डा. कृष्णप्रसाद आचार्य र प्रमिला बज्राचार्य सचिवमा बढुवा भएका हुन् । नयाँ बढुवामा परेका डा. दामोदर रेग्मी र पाण्डे प्रशासनतर्फ तथा आचार्य र बज्राचार्य प्राविधिकतर्फबाट सचिवमा बढुवा भएका हुन् । रेग्मीलाई ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा गरिएको हो । प्रशासनसेवातर्फ सिफारिस भएका तीन जना वरिष्ठ सहसचिवमध्ये गणेशप्रसाद पाण्डेलाई सचिवमा बढुवा गरिएको छ । यसैगरी सचिव बढुवा सिफारिस समितिले प्रशासनतर्फबाट बढुवा गर्न पाण्डेसँगै मधुसुदन बुर्लाकोटी र कृष्णहरि पुष्करलाई पनि सिफारिस गरेको थियो । यी तीनजनामध्ये मन्त्रिपरिषद बैठकले पाण्डेलाई चुनेको हो ।
सिफारिस समितिले कृषि तथा वनसेवातर्फ रिक्त रहेको एक सचिव पदका लागि वरिष्ठ सहसचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यसहित निरु दाहाल पाण्डे र दीपक खरालको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस सूचीको एक नम्बरमा रहेका आचार्यलाई नै मन्त्रिपरिषद बैठकले बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्जिनियरिङ सेवातर्फ सहसचिव बज्राचार्यलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेकपा एमालेमा एकता कायमकालागि पार्टीको दोस्रो तहका नेता सक्रिय
भेरोसेल खोपको दोश्रो डोज लगाउन सुरु